आभूषण Archives -
इराकबाट धमाधम नेपाली स्वदेश फर्काइँदै
January 8, 2020 upabhokta SarokarLeaveaComment on इराकबाट धमाधम नेपाली स्वदेश फर्काइँदै
काठमाडौं। अमेरिकी आक्रमणमा इरानी उच्च सैन्य कमाण्डर जर्नेल कासिम सुलेमानी मारिएपछि इराकमा बढेको तनावका बीच इराकको राजधानी बग्दादस्थित अमेरिकी दूतावास तथा अमेरिकी सैनिक बेस क्याम्पमा कार्यरत थप ३० जना नेपालीलाई नेपाल फर्काइँदैछ। यसअघि आइतबार र सोमबार...
ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका दुगड भारतीय भएको खुलासा
November 24, 2019 November 24, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका दुगड भारतीय भएको खुलासा
काठमाडौं। एक भारतीय मिडियाले नेपालका एक मन्त्रीलाई भारतीय दावी गरेको छ । हालै पुनर्गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका मोतीलाल दुगडलाई भारतको राजस्थानको मिडिया थार एक्सप्रेसले भारतीय दावी गरेको छ । था...
प्रधानसेनापतिको १६ बर्षे पेन्सन प्रस्ताव अर्थद्वारा बदर
November 15, 2019 November 15, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on प्रधानसेनापतिको १६ बर्षे पेन्सन प्रस्ताव अर्थद्वारा बदर
काठमाडौं । हाल कायम रहेको २० बर्षे पेन्सन अवधि घटाएर १६ बर्षेमा झार्नुपर्ने माग राख्दै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। तल्लो दर्जामा काम गर्ने जवानहरुको पीडालाई लक्षित गर्दै प्रधानसेनापति थापाले रक्षा मन्त्रालयल...
आज काग तिहार, कागको पूजा किन गरिन्छ ?
October 26, 2019 October 26, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on आज काग तिहार, कागको पूजा किन गरिन्छ ?
काठमाडौं । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिनमा मनाइने काग तिहार पर्व आज यमराजको दूतका रुपमा कागलाई मीठो मीठो चीज खान दिएर मनाइँदैछ । कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीकै दिन शुरु हुने यमपञ्चक भने यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण शुक्रबार बेलुकीदेखि नै शुरु भएको छ । शुक्रबा...
तिहारमा झिलिमिली बत्तिले सिंगारियो काठमाडौं, यस्तो देखियो फोटो फिचर
October 25, 2019 October 25, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on तिहारमा झिलिमिली बत्तिले सिंगारियो काठमाडौं, यस्तो देखियो फोटो फिचर
काठमाडौं । काग तिहार, कुकुर तिहार, गाई तिहार(लक्ष्मी पूजारदीपावली), गोरु तिहार(म्हः पूजा) र भाइटीका गरी पाँच दिनसम्म यो पर्व मनाइन्छ । २०७६ सालमा तिहारका पाँच दिन अर्थात यमपञ्चक कात्तिक ८ गतेबाट शुरु भई कात्तिक १२ गते भाइटीका परेको छ, नेवार समुदायले ...
October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on यो तिहारमा नखुल्ने भो बालगोपालेश्वर
काठमाडौं । भाइटीकाको दिनमा मात्रै खुल्ने रानीपोखरी बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर यस वर्ष पनि नखुल्ने भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पु¥याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ हुँदा यस वर्षको तिहारमा प...
भाइरल अघोर बाबाले गरे बिहे, श्रीमाती सहित मिडियामा (भिडियो सहित)
October 21, 2019 October 21, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on भाइरल अघोर बाबाले गरे बिहे, श्रीमाती सहित मिडियामा (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय युट्युब लगायत विभिन्न समाजिक संजालहरुमा भाइरल बन्दै आएका अघोर बाबाले अन्ततः बिवाह गरेका छन् । कार्यक्रमका लागि चितवन जाँदा नजिकैको देवघाट मन्दिर पुगेर नदी किनारबाट आफूले यस अघि नै विबाह गरिसकेको कुरा भिडियो मार्फत् सार्वजानिक गरेका हु...
मासुको मूल्य नघटाए सरकारले नै सुपथमूल्यमा खसीबोका बिक्री गर्ने
September 27, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on मासुको मूल्य नघटाए सरकारले नै सुपथमूल्यमा खसीबोका बिक्री गर्ने
काठमाडौं । मासु व्यापारीहरूले बजारमा आफ्नो मनोमानी तरिकाले मासुको मूल्य निर्धारण गरी बिक्रि गरिरहेका छन् । बजारमा मासु पसलै पिच्छे मासुको मूल्य फरक फरक देख्न सकिन्छ । भारतबाट खसीबोका आयात रोकिएपछि नेपालमा खसीबोकाको मूल्य एकाएक वृद्धि भएको हो । अहिले ...
September 24, 2019 September 24, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on सुनको मूल्य बढ्यो
साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । सोमबार प्रतितोला ७१ जार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज सय रुपैयाँले बढेर ७१ हजार ४ सय पुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ७१ हजार १ सय रुपैयाँ पुगेको...
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन अग्रवालमाथि कालो मसी छ्यापियो
September 15, 2019 upabhokta SarokarLeaveaComment on चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन अग्रवालमाथि कालो मसी छ्यापियो
काठमाडौंः त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालमाथि कालो मसी छ्यापिएको छ ।आइतबार दिउँसो २ बजे उनको कार्यकक्षमा पुगेर आफूलाई पत्रकार बताउने एक व्यक्तिले कालो मसी छ्यापेका हुन् । डाक्टर सापले ...